Iyo Beta 5 yeIOS 11 inovandudzika mubhatiri uye mashandiro asi ichiri kushayikwa | IPhone nhau
IOS 5 Beta 11 inovandudza bhatiri uye kuita asi ichiri kushomeka
Takatopedza mazuva mashoma ekutanga chenjedzo ne IOS 5 Beta 11 iyo yakasvika Muvhuro wapfuura, pakarepo mushure meChipiri iyo Beta 4 yeIOS 11 yakasvika mune yayo yeruzhinji vhezheni, asi ichiri kungofanana kuumbana, kufamba nekambani yeCupertino yatisinganzwisise zvakanyanya. Muchidimbu, ichi chave chiitiko changu neBeta 5 yeIOS 5 yeIOS 11 pane iyo iPhone 6s uye iyo iPad Air 2.
Sekutanga kukwezva, chokwadi ndechekuti kushandiswa kwebhatiri kwave kuri nani, chimwe chinhu icho chisina kunetsa kufunga iyo chaiyo drainage yeiyo yapfuura vhezheniNekudaro, isu tinoona zvakawanda zvikanganiso zvichiri kupenyerwa uye nazvo zvavanofanira kushanda nesimba zvakanyanya kana vachida kusvika nenguva.
Mune iyo skrini yepamusoro tinogona kuwana muenzaniso wekushandisa kwemazuva ese kwandinokwanisa kuwana kubva ku iPhone 6s inomhanya iOS 11 Beta 5 zuva nezuva. Kunyange chiri chokwadi kuti yakavandudzika zvishoma (haina kusvika maawa mana ekushandisa mumaBetas apfuura), kuchine zvikumbiro zvinokanganisa chaizvo kuzvitonga, senge YouTube. Parizvino, kuita kwese kwechigadzirwa hakusi kutaridzika kudiwa, muchokwadi kune basa rakawanda richiri kuda kuitwa.
Zvichakadaro, pane iyo iPad Air 2 pakange pasina sarudzo kunze kwekudzokera kuIOS 10.3.3, inova yakajeka mwenje, nekuti iyo iPad ndiyo panodiwa kudhonza mashandiro ehurongwa anonyanya kuoneka, izvo zvakaita kuti IOS 11 iPad bhatiri. inoyerera kunyangwe kana mudziyo uri muhope dzese pamwero unosvika makumi maviri muzana pazuva pazuva pazvakangoitika mamiriro uye mukunyarara. Zvirokwazvo, IOS 11 mabhatiri emagetsi akatsiga pa iPhone asi achiri akakwirira zvakanyanya paIpad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » IOS 5 Beta 11 inovandudza bhatiri uye kuita asi ichiri kushomeka
Mangwanani akanaka, ini ndinowanzo gadzira chando, kunyanya nemakamera uye chimwe chinhu muSafari (ndine 7 Plus). Kwazisai uye wakanakisa vhiki !!
Consumer Report inomira ichikurudzira Surface yeMicrosoft
Iyi ndiyo ichave iri bhatani reKumba mune ramangwana iPhone 8